7*7 1*19 PVC/PU yakavharwa simbi waya tambo kusvetuka tambo 3mm 4mm
Wire Skipping Tambo, kureba kunogadziriswa Kushandisa simbi tambo tambo yemukati musimboti, 7 * 7 chimiro chakanyanya kupfava uye chinochinjika, simbi waya dhayamita 1.5mm, gobvu tambo tambo, yakatsiga uye isingapepereki, kupfeka-inodzivirira PVC/PU kuputira, kureba kunogona kutemwa. , 2.8m-3m Chigadzirwa chekushandisa: kusimba, kuderedza uremu, varaidzo
Nzira yekusarudza tambo yekusvetuka
1. Tarisa uone zvinhu
Tambo yakapfava haina ngozi uye yakakodzera kusvetuka zvishoma nezvishoma.Tambo dzesimbi kana tambo dzenaironi hadzina kukodzera vanhuwo zvavo.Tambo dzepurasitiki nerabha dzine huremu hwakati, saka dzakakodzerwa nevanoda kukurumidza.
2. Sarudza maererano nemhomho
Vanotanga vanogona kusarudza yakajeka, yakasimba, yakaonda, uye humwe huremu hwepurasitiki yekusvetuka tambo.Tambo ine huremu hwakati, saka vanotanga vanogona kuizunza nyore.Vakwegura vanofanira kushandisa tambo yekotoni.Tambo yerudzi urwu inonzwa kunaka kana ikandwa, hairwadzi kurova muviri, uye kumhanya hakusi kukurumidza.Nyanzvi dzezvemitambo dzinogona kusarudza naironi yekusvetuka tambo.Rudzi urwu rwetambo rwakanyanya kuoma uye runorema, asi maekisesaizi maitiro akanaka.Uyezve, tambo yejira inosvetuka kwenguva yakareba uye haizopfeki maoko.Inokodzera vanhu vane frequency yakakura uye yakanyanya kusimba maekisesaizi.
3. Tarisa kureba kwetambo
Kureba kwetambo kwakanakisisa kugadziriswa.Kana tambo yakarebesa kana kupfupika, inokonzeresa mafambiro asina kurongeka pakusvetuka.Nekuvandudzwa kwehunyanzvi hwekusvetuka tambo, kureba kwetambo yekusvetuka kunogona kupfupikiswa zvishoma nezvishoma.Kazhinji kutaura, kana wakamira netsoka imwe pakati petambo, zvakanyanya kufanira kukwevera mativi maviri etambo kuhapwa.
4. Tarisa mubato
Kureba nekukora kwechibato kunokoshawo zvikuru.Kurebesa kwacho, ndiko kukura kwekutendeuka kwetambo yekusvetuka.Paunotanga kusvetuka, zviri nani kusarudza mubato wakareba une 5cm yasara pamberi kana wakabata mubato.Ukobvu hunosvika 22 ~ 25mm, uye unogona kubata zvibato zviviri zviri nyore neruoko rumwe.
Zvakapfuura: PVC kusvetuka tambo ine mavara yakavharwa simbi waya tambo
Zvinotevera: Waya kusvetuka tambo PVC PU yakavharwa
tambo yokusvetuka isina tambo, kugwinya kusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera, svetuka tambo tenga, nyanzvi yekusvetuka tambo, bata kusvetuka tambo,